HALIIMA YAREY oo ku adkaysanaysa in doorasho Xisbi ka dhici doonta Soomaaliya 2020, Laakiin dad badan ayaa shaki gelinaya arrintaas | Newsomali
HALIIMA YAREY oo ku adkaysanaysa in doorasho Xisbi ka dhici doonta Soomaaliya 2020, Laakiin dad badan ayaa shaki gelinaya arrintaas
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) ayaa ka warbixiyay nidaamka doorasho ee dalka ka dhici doona sanadka 2020, kaddib markii shirkii Golaha Amniga Qaranka ee ka dhacay Baydhabo la isku raacay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod.
Xaliima Yarey ayaa sheegtay in Dastuurka uu qorayo in afartii sano ay dhacdo doorasho qof iyo cod, balse aanay aheyn wax hada lagu heshiiyay, iyadoo xustay in shirkii Baydhabo ka dhacay lagu heshiiyay in la isla meel dhigo nooca doorasho ay noqoneyso.
“Doorashada waxay noqon doontaa, doorasho xisbiyo siyaasadeed ku tartamaan, doorasho isu dheeli tiran, iyadoo la ilaalinayo habkii qabaa’ilka ee horay u jiray waa in xisbiyada siyaasadeed ay xafiisyo ku yeeshaan 9 Gobol”ayay tiri Xaliima Yarey.
Waxaa ay sheegtay in doorashada ay barbar socon doonto howlo badan oo ay kow ka tahay sugida amniga deegaanada ay doorashada ka dhaceyso.
Sidoo kale waxaa ay soo hadal qaaday in habka doorashada in kuraas lagu tartamayo, isla markaana ay ka dhici doonto dhamaan magaalooyinka, isla markaana loo baahan yahay xisbi walba ee soo dhameystira shuruudaha inuu cododka ka helo magaalooyinka.
“Qofka xisbi ayuu dooranayaa ee ma dooranayo qofka deegaankiisa jooga, xisbiga codka uu helo ayaa loo qeybinayaa dadkaas oo dhan ayaa is matalaya, waana nidaam isku dheeli tiran”ayay tiri Xaliima Yarey.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in doorashada 2020 ay ka horeyso howlo badan oo loo baahan yahay in la qabto, sida in deegaanada gacanta ku hayaan Al-Shabaab laga saaro, in la xaqiijiyo ammaanka magaalooyinka maamulada ka jiraan iyo dhameystirka iyo dib u eegista Dastuurka.